Miyay Saddexda Gool Dhaliye Ee Atletico Madrid Ugu Muhiimsani Diyaar U Noqon Karaan Kulanka Liverpool Ee Champions League? - Gool24.Net
Miyay Saddexda Gool Dhaliye Ee Atletico Madrid Ugu Muhiimsani Diyaar U Noqon Karaan Kulanka Liverpool Ee Champions League?
February 5, 2020 Mahamoud Batalaale
Kooxda Atletico Madrid ayaa ku jirta dhibaato wayn oo dhaawacyo ah iyada oo la galayo waqtiga xili ciyaareedka ugu muhiimsan. Diego Simeone ayaa arkaya kooxdiisa Atletico Madrid oo kaalinta 6 aad kaga jirta horyaalka La Liga.
Laakiin waqtigii ugu muhiimsanaa ee xili ciyaareedkan ayaa Atletico Madrid ku soo dhawaanaya iyada oo dhawaan garoonkeeda Estadio Wanda Metropolitano ku qaabili doonta kooxda koobka Champions League difaacanaysa ee Liverpool.
Dhaawacyada Atletico Madrid ayaa iskugu jira kuwo waqti dhaw soo laaban kara iyo kuwo tartan adag u gali doona in ay taam u noqdaan kulanka adag ee Liverpool.
Kooxda Jurgen Klopp oo hadda fasax jiilaalka ee markii ugu horaysay England laga hirgaliyay ku maqan ayaa ku soo laaban doonta garoonkii ay koobka Champions League xili ciyaareedkii la soo dhaafay ugu soo guulaysteen ee Estadio Wanda Metropolitano balse markan waxay mari doonaan imtixaankii xili ciyaareedkan ugu adkaa.
Waa Sidee Xaalada Dhaawacyada Atletico Madrid?
Atletico Madrid waxaa dhaawacyo kaga maqan saddexdii gool dhaliye ee uu Diego Simeone ku tiirsanaa kuwaas oo kala ah Joao Felix, Alvaro Morata iyo Diego Costa, waxayna dagaal ugu jiraan in ay taam u noqdaan kulanka Liverpool.
Laakiin dhaawacyada Atletico Madrid intaas oo kaliya kuma koobna balse waxaa talaadadii qaliin maray difaaca midig ee Kieran Trippier kaas oo ku biiray liiska dhaawacyada Atletico Madrid.
Diego Simeone waxa uu doorashada difaaca midig ee uu ka dhaacmay Kieran Trippier u haystaa Sime Vrsaljko iyo Santiago Arias laakiin Trippier ayaa isku dayi doona in haddii aanu kualnka lugta hore diyaar u noqon Liverpool in uu kulanka Anfield isku diyaarin doono in uu soo laabto.
Warka ugu fiican ee ay Atletico Madrid heshay ayaa ah in Koke uu soo laabanayo shan kulan oo uu kooxdiisa ka maqnaa waxaana la filayaa in kulanka Granada uu ciyaari karo taas oo wax wayn u ah Simeone iyo kooxdiisa Atletico Madrid.
Waxaa la filayaa in Atletico Madrid ay February 15 dib u heli doonto Jose Gimenez iyo Arias taas oo soo yarayn karta musiibada dhaawacyada kooxda Atletico Madrid.
Laakiin walwalka ugu wayn ee Diego Simeone ayaa ah saddexda xidig ee weerarka uga ciyaara kooxdiisa ee Joao Felix, Alvaro Morata iyo Diego Costa kuwaas oo dhaawacyo kala duwan kooxda kaga maqan.
Warar soo baxay ayaa sheegaya in Diego Costa uu diyaar u noqon karo kulanka Liverpool laakiin arinta ugu muhiimsan ayaa ah haddii uu taam buuxa u noqon doono kulanka Reds.
Liverpool iyo Atletico Madrid ayaa kulankooda lugta kowaad ee wareega 16ka Champions League waxay wada ciyaari doonaa February 18, waxayna kadib Anfield si rasmi ah ugu kala calaf qaadi doonaan March 11.